Professional Plastic karama Manufacturer | Fukang
Anyị bụ ndị ọkachamara n'ichepụta na mbupụ ụdị dị iche iche nke PET na HDPE karama.
Anyị bụ ndị ọkachamara n'ichepụta na mbupụ ụdị dị iche iche nke PET na HDPE karama. nke a na-ejikarị maka ọgwụ ọgwụ na ụlọ ọrụ nri, ihe niile bụ nri nri ma gafere FDA, EU 、 LFGB certifications,
Osisi AkpụkpọAkpa plastik maka osePlastik dị ụtọMkpokọta mkpụrụ osisi na okpu emepụtara dị iche, ka karama na-eme ka ebu ụzọ mepụta embrayo iji mepụta karama, okpu bụ otu nzọ nzọgụ naanị.
Karama nlekọta ahụikeNdị na-emepụta akwụkwọ na-emepụta ọgwụMpempe akwụkwọ plasticNwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị!Anyị bụ ndị na-ere ahịa Fukng Flọ mmanụ. Anyị guzobere na 2006 ma anyị nwere ike inyere gị aka, anyị nwere ike inyere gị aka na China, anyị nwere ike ịmepụta narị atọ kwa ụbọchị.
Mkpokọta mkpụrụ osisi na okpu emepụtara dị iche, ka karama na-eme ka ebu ụzọ mepụta embrayo iji mepụta karama, okpu bụ otu nzọ nzọgụ naanị.Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị!
Ahaziri maka gị
(1) Omenala agba: Anyị nwere ike ime ka agba ọ bụla maka karama plastik dịka nọmba agba pantone gị.
(2) Omenala imewe: Ọ bụrụ na ị nwere gị imewe, na-anabata ka iziga gị imewe ma ọ bụ sample anyị, anyị nwere ike ime dị ka kwa gị kpọmkwem arịrịọ.
(3) Akara ngosi / akara: Akara nke gị nwere ike itinye na ngwaahịa gị site na ịpị ọkụ ọkụ, akwụkwọ ngebichi silk, imbossing, mkpuchi UV, ihe mmado ma ọ bụ ịda mbà.
(4) Ihe nlele efu: Anyị nwere ike ịnye karama n'efu ka ị nwalee ogo.
Afọ 21 ilekwasị anya na karama plastik
Dongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd guzobere na 1999, emi odude ke Guangdong, China na kpuchie 9000 square mita. Anyị bụ ndị ọkachamara n'ichepụta na mbupụ ụdị dị iche iche nke PET na HDPE karama. nke a na-ejikarị maka ọgwụ ọgwụ na ụlọ ọrụ nri, ihe niile bụ nri nri ma gafere FDA, EU 、 LFGB asambodo, na ngwaahịa anyị bụ ndị ama ama na Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newsland, Mexico, Philippine wdg ...